Yaasiin Fareey oo beeniyay warar kasoo baxay xaaladda Mukhtaar Roobow. | Warbaahinta Ayaamaha
Yaasiin Fareey oo beeniyay warar kasoo baxay xaaladda Mukhtaar Roobow.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Gaashaanle Sare Yaasiin Farey oo ah ku simaha agaasimaha hay’adda Nabadsuggidda iyo Sirdoonka ee NISA ayaa beeniyay hadal ay ehelada Mukhtaar Rooboow ku sheegeen in warbixinta uu kasoo saaray xaaladdiisa ay tahay mid aan sax aheyn.
Waxaa uu sheegay in Mukhtaar Rooboow uu ku suganyahay guri ku dhexyaalla xarunta NISA, amnigiisuna uu suganyahay, isagoo intaas ku daray in mas’uuliyadda ugu badan ee NISA ay tahay in isaga la ilaaliyo.
Sidookale waaxa uu intaas ku daray in nolosha iyo amniga ROOBOW ay u hayaan sida ay ku sheegeen warqaddii uu soo saaray, wuxuuna intaas ku daray inaysan jirin wax ku kallifaya inay abuuraan waxyaabo aan jirin.
Yaasiin Farey sheegay inaysan jirin caafimaad darro ama culeys gaar ah oo heysata Mukhtaar Rooboow.